Samachar Batika || News from Nepal » रिमालाई श्रीमानको खाचो परेकै हो त ?
रिमालाई श्रीमानको खाचो परेकै हो त ?
पछिल्लो समय चर्चामा रहेको नेपालकै पहिलो स्टयान्ड अप कमेडी रियालिटी शो “कमेडी च्याम्पियन” को एक मात्र होस्ट रिमा विश्वकर्मा पनि सामाजिक सञ्जालमा गज्जबले छाएकी छिन् । प्रसंग हो विवाहको, केही समय अगाडि उक्त रियालिटी शो कै जर्ज बरिस्ठ हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेल सँग नाम जोडिएर विवाहको चर्चा चलेको थियो । तर, यस बिषयलाई दुवै जनाले दाजु बहिनिको नाता लगाउँदै स्पस्टिकरण दिएर टु’ङ्ग्याइसकेको छ ।
हरेक हप्ता सोमबार र मंगलबार राति ९ बजे कान्तिपुर टेलिभिजन र युट्युबबाट एकसाथ प्रसारण हुने “कमेडी च्याम्पियनमा हरेक हप्ता विवाहकै चर्चा बढि हुनेको गरेको पाइन्छ । फेरि पनि विवाहको चर्चा : कमेडी च्याम्पियनको ट्रेलर युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ , जस्मा बरिस्ठ हास्यकलाकार तथा समाजसेवी द्वय सीताराम कट्टेल धुर्मुस, कुन्जना घिमिरे सुन्तली र अर्का हाँस्यकलाकार सुवोध गौतम अतिथिको रुपमा छन् ।
ट्रेलरमा सुन्तलीले सन्तान प्राप्तिको लागि समय चाहिने कुरा निकालेपछि अतिथि , जर्ज, र दर्शकविच हाँसो चलिरहँदा होस्ट रिमा विश्वकर्माले सन्तान पाउनको लागि समय मात्र नभएर पा’र्टनर पनि चाहिने बताएका थिए । रिमाको कुरामा हाँसो सँगै जर्ज ऋचा शर्माले “अहिलेलाई म’ज्जा आइरहेको छ” भनेकी थिइन् भने, अर्का जर्ज मनोज गजुरेलले पनि करोडका कुरा निकालेका थिए । जर्ज गजुरेलको कमेडी च्याम्पियनमा “करोड” शब्द थेगो नै बनिसकेको छ ।
के रिमा पा’र्टनरको खोजीमा छिन् ?
नायिका ऋचा शर्माले आज भन्दा चारबर्ष अगाडि लण्डनमा रहँदै आएका रोबर्ट विश्वकर्मा सँग धुमधामले लगनगाँठो कसेका थिए। तर, रिमा र रोबर्टको स’म्बन्ध मुस्किलले दुईबर्ष पनि टि’क्न सकेन ।
रिमा र रोबर्टले सम्बन्ध बि’च्छेद पछि एक अर्काको बारेमा मिडियामा अहिलेसम्म कुरा गरेका छैनन् । के कारणले उनिहरुको डि’भोर्स भएको हो भन्ने कसैलाई थाहा नभएपछि समय अभावले रिमा र रोबर्ट अ’लग्गिएको हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि, श्रीमान लण्डमा ब्यस्त श्रीमती म्युजिक भिडियो र चलचित्रमा ब्यस्त यसकारण पनि सम्बन्धमा द’रार आएको हुन सक्छ ।
विवाह पश्चात् रोबर्ट लण्डनमा र रिमा नेपालमा रहँदै आएका थिए।’ तर; अचानक उनिहरुले दुईबर्ष अघि छुट्टाछुट्टै संसारमा रमाउने निर्णयले स’म्बन्ध बि’च्छेद गरेका हुन् । रिमाका पुर्व पति रोबर्टले डि’भोर्स लगत्तै अर्कै युवतिसँग विवाह गरेका हुन्, भने रिमा विश्वकर्मा अहिलेसम्म पनि एक्लै छिन् । यसकारण पनि रिमाको विवाहको चर्चा बेला बेला चलिरहन्छ ।”
रिमाले नेपाल आइडल पहिलो र दोस्रो संस्करणमा होस्ट गरेकि हुन् । अहिले नेपाल आइडलको तेस्रो संस्करण चलिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति २७ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १३:१८